Oovimba beenkundla - Ilungelo laseMelika lokwazi
Indoda eswelekileyo icela iNkundla ePhakamileyo yaseCalifornia ukuba ibuyisele ibhaso lejaji kwityala leMonsanto Roundup
ezaposwa ngomhla Agasti 31, 2020 by UCarey Gillam
Umgcini wesikolo ophumelele ityala lokuqala ngqa kwizityholo zokuba uMonsanto's Roundup ubangela umhlaza ucela iNkundla ePhakamileyo yaseCalifornia ukuba ibuyisele i-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo wanikezelwa yijaji owaliva ityala lakhe kodwa inkundla yesibheno yaxhwitha i-20.5 yezigidi zeedola.
Ngokuqaphelekayo, isibheno sommangali uDewayne "Lee" Johnson sinefuthe elikhulu kunakwityala lakhe. Igqwetha likaJohnson libongoza inkundla ukuba ijongane nengxaki yomthetho enokuthi ishiye abantu abanjengoJohnson abajamelene nokusweleka kwixesha elikufutshane benomvuzo ophantsi kunabanye kulindeleke ukuba baphile iminyaka emininzi besezintlungwini nasezintlungwini.
“Kudala-dala ukuba iinkundla zaseCalifornia ziqonde, njengokuba ezinye iinkundla zisenza, ubomi buxabisekile kwaye abo baphanga ummangali iminyaka yobomi kufuneka benziwe bahlawulise ummangali kwaye bohlwaywe ngokufanelekileyo,” amagqwetha kaJohnson babhale kwisicelo sabo Ukujongwa ngokutsha kwenkundla ephakamileyo. "Ijaji ichaze ixabiso elinentsingiselo kubomi bukaMnu. Johnson, kwaye ngenxa yoko unombulelo. Ucela le Nkundla ukuba ihloniphe isigqibo sejaji kwaye ibuyise elo xabiso. ”
Ijaji evumelekileyo efunyenwe ngo-Agasti 2018 yokuba ukuvezwa kwe-Monsanto's glyphosate-based herbicides, eyaziwa kakhulu ngegama le-Roundup, yabangela uJohnson ukuba aphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma. Ijaji yafumanisa ukuba iMonsanto yenze into yokufihla umngcipheko weemveliso zayo ngokuziphatha kakubi kangangokuba inkampani kufuneka ihlawule uJohnson i-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayo ngaphezulu kwe- $ 39 yezigidi kwixa elidlulileyo nelizayo.
Emva kwesibheno esivela eMonsanto, esathengwa yinkampani yaseJamani iBayer AG kwi-2018, ijaji yetyala yehlisa i-289 yezigidi zeedola ukuya kwizigidi ezingama-78 zeedola. IMonsanto ibhenele ukufuna ityala elitsha okanye ibhaso elincitshisiweyo. UJohnson wenza isibheno efuna ukubuyiselwa kumvuzo wakhe opheleleyo.
Inkundla yezibheno kwityala emva koko yasika ibhaso kwi-20.5 yezigidi zeedola, icacisa into yokuba uJohnson wayekulindeleke ukuba aphile ixesha elifutshane.
Inkundla yezibheno yalinciphisa ibhaso lomonakalo ngaphandle kokufumana Kwakukho ubungqina "obuninzi" bokuthi i-glyphosate, kunye nezinye izithako kwimveliso yeRoundup, yabangela umhlaza kaJohnson kwaye "kwabakho ubungqina obugqithisileyo bokuba uJohnson uhluphekile, kwaye uzakuqhubeka nokuhlupheka ubomi bakhe bonke, iintlungu kunye nokubandezeleka. ”
Ityala likaJohnson laligqunywe ngamajelo eendaba kwihlabathi liphela kwaye beka obala kwimizamo kaMonsanto yokusebenzisa irekhodi yesayensi kwi-glyphosate kunye ne-Roundup kunye neenzame zayo zokuthula abagxeki kunye nefuthe labalawuli. Amagqwetha kaJohnson abonisa abagwebi ii-imeyile zenkampani yangaphakathi kunye nezinye iirekhodi ezibonisa oososayensi baseMonsanto bexoxa ngemibhalo yezenzululwazi yokubhala ghost ukuzama ukuxhasa inkxaso kukhuseleko lweemveliso zenkampani, kunye nonxibelelwano oluchaza izicwangciso zokuhlazisa abagxeki, kunye nokuphelisa uvavanyo lukarhulumente. Ityhefu ye-glyphosate, ikhemikhali ephambili kwiimveliso zeMonsanto.
Ukuphumelela kwetyala likaJohnson kukhuthaze ukufayiliswa ngamashumi amawaka ezomthetho ezongezelelweyo. IMonsanto yaphulukana nezilingo ezintathu kwezintathu ngaphambi kokuba ivumelane ngoJuni ukuba ihlawule ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi ukuhlawula kufutshane ne-100,000 yamabango anje.
Indawo yokuhlala yile usaqhubeka, Nangona kunjalo, njengoko iBayer ilwa nendlela yokuthintela ukumangala kwixesha elizayo.
Kudliwanondlebe, uJohnson wathi uyazi ukuba umlo osemthethweni noMonsanto ungaqhubeka kangangeminyaka emininzi kodwa wayezimisele ukuzama ukubamba inkampani ukuba iphendule. Uye wakwazi ukugcina ukugula kwakhe kujongiwe ukuza kuthi ga ngoku ngonyango lwe-chemotherapy kunye nonyango lwemitha, kodwa akaqinisekanga ukuba iya kuqhubeka ixesha elingakanani.
"Andicingi ukuba nasiphi na isixa besinokwanela ukohlwaya loo nkampani," utshilo uJohnson.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, B-iseli engeyiyo iHodgkin lymphoma, Bayer, umhlaza, enkantolo, UDewayne "Lee" uJohnson, EPA, zolimo, ukutya, glyphosate, impilo, ityala, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, Ranger Pro, Yisonge yonke, inzululwazi
Umceli mngeni ojolise kwisicwangciso sokwenza iklasi kwindawo yokuhlala yaseBayer Roundup
ezaposwa ngomhla Juni 26, 2020 by UCarey Gillam
Isicwangciso sokulibazisa naliphi na ibango lomhlaza we-Roundup kangangeminyaka kwaye sitshintshe umbuzo ophambili wokuba ingaba umbulali wokhula ubangela umhlaza kwi-jury ukuya kwipaneli ekhethwe ngoososayensi ejongene nenkcaso evela kwamanye amagqwetha abamangali aqala kwaye akhokelela Ubunzima bobundlobongela obuchasene nomenzi we-Roundup uMonsanto, imithombo ekufutshane nesimangalo ithe.
Amalungu aliqela eefemu zomthetho akhokelayo aphumelele amatyala amathathu kwamathathu ebeka abaguli abanomhlaza ngokuchasene neMonsanto bacinga ngokucela umngeni kwimigqaliselo yesindululo "sezenzo zodidi" ekuxoxiswene ngaso phakathi komnini weMonsanto uBayer AG kunye neqela elincinci lamagqwetha angazange umphambili wetyala leRoundup, itsho imithombo.
Isindululo sokulungiswa kwamanyathelo eklasi yinto ye sUkulila i-10 yezigidigidi zeedola Ukuhlawulwa kwamatyala eRoundup eBayer kubhengeze nge-24 kaJuni.
Kuvavanyo ngalunye olugcinwe ukuza kuthi ga ngoku, iijaji zafumanisa ukuba ubunzima bobungqina benzululwazi bubonakalisile ukuba ukubonakaliswa kweRoundup kubangele ukuba abamangali baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) kwaye iMonsanto igubungele umngcipheko. Kodwa phantsi kwesindululo loo mbuzo uza kuya kumalungu amahlanu "kwipaneli yesayensi," hayi ijaji.
"Ngokusisiseko kuhlutha ummangali ilungelo labo lomgaqo-siseko lokuxoxwa kwetyala," utshilo omnye umthombo osondele kwisimangalo.
I pindawo yokuhlala eklasini unokufaka isicelo nakubani na ovezwe kwi-Roundup owayengazange afake isimangalo okanye agcine igqwetha ngoJuni 24, 2020, nokuba umntu sele efumene ukuba unomdlavuza na bakholelwa ukuba kungenxa yokuvezwa kweRoundup.
Isicwangciso sahlanganiswa yiBayer kunye neefemu zomthetho zikaLieff Cabraser Heimann & Bernstein; Uphicotho-zincwadi kunye namaqabane; Ifemi yoMthetho eDugan; kunye negqwetha uSamuel Issacharoff, uNjingalwazi kaReiss woMthetho woMgaqo-siseko kwiSikolo soMthetho kwiYunivesithi yaseNew York.
Isivumelwano kufikelelwe kuso emva konyaka omnye "weenzame ezingapheliyo" zothethathethwano, igqwetha u-Elizabeth Cabraser utshilo kwisibhengezo Kwinkundla exhasa ukuhlaliswa okucetywayo.
Inokubeka "ixesha lokuma" apho abamangali eklasini abanakho ukufaka isimangalo esitsha esimalunga neRoundup. Kwaye ifuna amalungu eklasi ukuba akhulule "nawaphi na amabango ngokuchasene neMonsanto ngenxa yomonakalo owohlwayayo kunye noqwalaselo lonyango olunxulumene nokuvezwa kweRoundup kunye ne-NHL."
Ngokuqaphelekayo, esi sicwangciso sichaza ukuba endaweni yokuqhubela phambili nolunye uvavanyo lwejaji, iqela lenzululwazi liza kuqala ukumiselwa ukumisela "impendulo eyiyo" "kumda wokubuza" wokuba ingaba ikhona na ikhonkco phakathi kweRoundup neNHL .
Isicwangciso ubiza iBayer ukuhlawula ukuya kuthi ga kwi-150 yezigidi zeedola kwimirhumo kunye neendleko zamagqwetha abandakanyekayo kunye "namabhaso abamele iinkonzo zodidi" ukuya kuthi ga kwi-25,000 yeedola kumntu ngamnye okanye kwi-100,000 yeedola.
Ngokubanzi, iBayer ithe izakubeka bucala i-1.25 yezigidigidi kulungiselelo. Imali yayiza kusetyenziselwa ukubuyekeza amalungu eklasi afunyaniswe ene-NHL "ngeziphumo zokulibaziseka" kwezimangalo, kunye nokuxhasa ngezimali uphando malunga nokufunyaniswa nokunyangwa kwe-NHL, phakathi kwezinye izinto.
Isindululo sokufuna imvume yokuqala yokuhlawulwa kweklasi safakwa ngolwesiThathu kwiNkundla yeSithili sase-US ukuba iSithili saseMantla saseCalifornia siphathwe nguJaji Vince Chhabria. I-Chhabria iye yajonga amatyala amaninzi e-Roundup adityaniswe ndawonye njengezimangalo ezininzi. Ekwaluseni inani elikhulu lamatyala asele efayilisiwe, uChhabria wajongana nolunye lovavanyo lweRoundup, kunye nento eyaziwayo njengendlebe ethi "Daubert", apho weva khona iintsuku zobungqina besayensi kuwo omabini amacala emva koko wagqiba kwelokuba zanele ezenzululwazi. ubungqina bokubangela ukuba isimangalo siqhubeke.
Isindululo sokuhlaliswa kwabantu eklasini kwaxoxwa ngaso ngokwahlukeneyo kwesahlulo esiphambili esenziwe neenkampani zomthetho ezikhokelayo.
Kwi eyona ndawo yokuhlala, U-Bayer uvumile ukubonelela nge- $ 8.8 yezigidigidi ukuya kwi-9.6 yezigidigidi zeedola ukusombulula malunga neepesenti ezingama-75 zama-125,000 ezifakiweyo kunye nezingagcwaliswanga ezibangelwe ngabamangali abasola ukubhengezwa kwi-Roundup kaMonsanto kuphuhliso lwabo lwe-non-Hodgkin lymphoma. Amagqwetha abamele ngaphezulu kwama-20,000 XNUMX abamangali bathi abavumelananga ukuhlala neBayer kwaye loo matyala kulindeleke ukuba aqhubeke nokusebenza ngendlela yenkqubo yenkundla.
Nangona iMonsanto yaphulukana nesinye sezi zilingo zintathu zabanjwa ukuza kuthi ga ngoku, iBayer igcina izigqibo zejaji zinempazamo kwaye zisekwe kwiimvakalelo kwaye hayi kwisayensi elungileyo.
Ukukhethwa kwePaneli yeSayensi
U-Bayer kunye namagqwetha eklasi ecetywayo bazakusebenza kunye ukukhetha oososayensi abahlanu ukuba bahlale kwiphaneli engathathi cala, ezimeleyo, ngokwesicwangciso. Ukuba abanakho ukuvumelana ngokwenziwa kwepaneli icala ngalinye liya kukhetha amalungu amabini kwaye loo malungu mane aya kukhetha elesihlanu.
Akukho sazinzulu esisebenze njengengcali kumdibaniso we-Roundup litigation of federal oya kuvunyelwa ukuba abe kwiqela lenjongo. Ngokukodwa, akukho namnye "othe wanxibelelana nayo nayiphi ingcali" kwisimangalo malunga nomxholo.
Iphaneli iya kuba neminyaka emine yokuphonononga ubungqina besayensi kodwa inokufaka isicelo sokongezwa kwexesha ukuba kukho imfuneko. Ukuzimisela kuya kubopha macala omabini, esi sicwangciso sitsho. Ukuba iphaneli igqiba ekubeni kukho unxibelelwano olunokubangela phakathi kwe-Roundup kunye ne-NHL, abamangali bangaqhubeka ukuya kufuna izilingo zamabango abo.
"Ulwazi lunamandla kwaye oku kuhlaliswa kuxhobisa amalungu eklasi ukuba abambe iMonsanto ukuba baphendule ngokwenzakala kwabo ukuba kwaye xa iSigqeba seNzululwazi sigqiba ukuba imeko iyoneliseka," sitsho esi sicwangciso.
Ukugcwaliswa kwenkundla yomdibaniso kucela ukuvunywa kwetyala lokuqala kwintsuku ezingama-30.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Akohlulwanga Bayer, California, umhlaza, enkantolo, EPA, zolimo, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, Yisonge yonke, inzululwazi, ukubulala ukhula
Inkundla yezibheno imamela iimpikiswano malunga nelahleko yokuqala yokuvavanywa kwetyala likaMonsanto
ezaposwa ngomhla Juni 2, 2020 by UCarey Gillam
Isigqibo sejaji yaseCalifornia esola i-Monsanto ye-herbicide yomhlaza womgcini wesikolo yayineempazamo kwaye ingahambelani nomthetho, igqwetha laseMonsanto uxelele iphaneli yejaji yezibheno ngoLwesibini.
Inkampani yokubulala ukhula eglyphosate-eyaziwayo njenge-Roundup- ixhaswa ngokupheleleyo yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) kunye "nabalawuli kwihlabathi liphela," igqwetha uDavid Axelrad uxelele iijaji kunye nenkundla yezibheno yaseCalifornia. ISithili sokuBhena sokuqala.
U-Axelrad uthe uMonsanto wayengenalo uxanduva lokulumkisa nabani na malunga nomngcipheko wesifo somhlaza enikwe isivumelwano sokulawula ukuba ababulali bakhe bokhula bakhuselekile.
"Kukungalunganga okusisiseko ukubamba iMonsanto ibenoxanduva kwaye yohlwaya ilebheli yemveliso ebonisa ngokuchanekileyo kungekuphela kokumiselwa kwe-EPA kodwa ukuvumelana kwihlabathi liphela ukuba i-glyphosate ayisiyomhlaza," watsho kwindibano ethathe iyure. Inkqubo igcinwe ngomnxeba ngenxa ye-COVID-19 yokuthintela ukufikelela kwinkundla.
Umdibanisi weJaji uGabriel Sanchez ubuze ubunyani bale ngxoxo: "Unezifundo ngezilwanyana… izifundo zendlela, unezifundo zolawulo," watsho, ethetha negqwetha likaMonsanto. Kukho inani, kubonakala ngathi, kupapashwe izifundo zoontanga… ezibonisa ubudlelwane obubalulekileyo phakathi kwe-glyphosate kunye ne-lymphoma. Ke andazi ukuba ndingavuma nawe ukuba inemvumelwano efanayo. Ngokuqinisekileyo iiarhente zolawulo zibonakala zikwelinye icala. Kodwa buninzi obunye ubungqina kwenye. ”
Isibheno sivela kwisigqibo sejaji se-2018 kwiNkundla ePhakamileyo yaseSan Francisco eyalela iMonsanto ukuba ihlawule i-289 yezigidi zeedola ku-Dewayne "Lee" Johnson, kubandakanya i-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo.
Ijaji kwityala likaJohnson lehlisa ibhaso lafikelela kwizigidi ezingama-78.5 zeerandi. Kodwa iMonsanto Bhena isigwebo, Ukucela inkundla ukuba iguqule isigqibo setyala kwaye ingene kwisigwebo seMonsanto okanye ibuye umva kwaye iphinde ityala kwimeko yetyala elitsha okanye ubuncinci banciphise umonakalo. UJohnson wabhena Ukufuna ukubuyiselwa kwebhaso elipheleleyo lejaji.
UJohnson ungomnye wamashumi amawaka abantu abavela eUnited States abaye bamangalela uMonsanto besithi iRoundup kunye nezinye izinto ezibulala ukhula ezenziwa yinkampani zibangela i-non-Hodgkin lymphoma kwaye le nkampani ichithe amashumi eminyaka igubungela umngcipheko.
UJohnson wafumana iwonga "lokukhetha" ngenxa yokuba oogqirha bathi iminyaka yakhe yobomi imfutshane kwaye angabhubha kwinyanga ezili-18 zolingo. UJohnson ubaphazamisile oogqirha kwaye uhlala ephila kwaye ufumana unyango rhoqo.
Ukuphulukana kukaMonsanto noJohnson kwaphawula ilahleko yokuqala yokulahleka kweRoundup kwinkampani, eyafunyanwa yiBayer AG yaseJamani ngoJuni 2018 kanye njengoko ityala likaJohnson laqala.
Ijaji kwityala likaJohnson lafumanisa ngokukodwa - phakathi kwezinye izinto - ukuba uMonsanto wayengakhathali ngokusilela ukulumkisa uJohnson ngomngcipheko womhlaza wemichiza yokubulala ukhula. Kodwa uMonsanto uthi esi sigwebo sasineempazamo ngenxa yokungabandakanywa kobungqina obubalulekileyo kunye noko abameli benkampani bakubiza ngokuba “kukugqwethwa kwesayensi ethembekileyo.”
Ukuba inkundla yezibheno ayiyaleli ukuba kuxoxwe ityala elitsha, uMonsanto wacela ukuba abagwebi okungenani banciphise isahlulo sebhaso lejaji "ngomonakalo ongekhoyo kwixesha elizayo" ukusuka kwi-33 yezigidi zeedola ukuya kwi-1.5 yezigidi zeerandi kwaye kususwe umonakalo owohlwayo ngokupheleleyo.
Amagqwetha kaJohnson alingo ukuba kufuneka afumane i-1 yezigidi zeedola ngonyaka ngentlungu kunye nokubandezeleka ngaphezulu kweminyaka engama-33 eyongezelelekileyo anokuhlala kuyo ukuba ebengenawo umhlaza.
Kodwa amagqwetha kaMonsanto athe uJohnson kufuneka afumane kuphela i-1 yezigidi zeedola ngonyaka ngentlungu kunye nokubandezeleka ngexesha lakhe lokuphila okanye i-1.5 yezigidi zeedola kwisithuba sexesha elizayo seenyanga ezili-18.
NgoLwesibini, u-Axelrad waphinda loo ngongoma: "Ngokuqinisekileyo ummangali angaphinde aphile ngexesha lokudla kwakhe iintlungu kunye nokubandezeleka okunokubangelwa kukwazi ukuba ubomi bakhe bufutshane," uxelele iphaneli yezomthetho. "Kodwa awungekhe uchache ngenxa yeentlungu nokubandezeleka okungenakulindeleka kwiminyaka apho ungasayi kuphila khona kwaye yiloo nto ummangalelwa ayifumanayo kwelityala."
U-Axelrad uxelele iijaji ukuba inkampani ibipeyintwe ngobuxoki njengokuziphatha gwenxa kodwa inyani ilandele isayensi kunye nomthetho. Uthe, umzekelo, nangona igqwetha likaJohnson latyhola uMonsanto ngokubhala ngesiporho amaphepha enzululwazi, oososayensi beenkampani benze "iingcebiso zokuhlela" zamaphepha aliqela apapashwe kuncwadi lwenzululwazi.
"Nokuba ingaba iMonsanto ibinokubakho na ngaphambili ekuchongeni ukuzibandakanya kwayo kwezi zifundo eyona nto iphambili kukuba ezo zifundo azivelisanga lwazi olungeyonyani okanye olulahlekisayo kwaye akukho nto ibonisa ukuba nabaphi na ababhali bezo zifundo babeza kutshintsha uluvo lwabo ukuba babe neMonsanto khange unike izimvo zomhleli, ”utshilo.
U-Axelrad uthe akukho bubi kwaye akukho sizathu sokwenzakaliswa kwetyala eliza kwenziwa ngokuchasene neMonsanto. Ukukhuselwa yinkampani ye-glyphosate-based herbicides kule minyaka ibisengqiqweni kwaye kuthembekile, utshilo.
“Akukho bungqina bokuba iMonsanto isasaza ulwazi olungeyonyani, olulahlekisayo okanye olungaphelelanga, akukho bungqina bokuba isenzo sayo sithintele ukuhanjiswa kolwazi kwiiarhente zolawulo ezifunekayo ukuphonononga ubungqina benzululwazi, akukho bungqina bokuba isenzo sayo sonakalise isigqibo sokugqibela kwaye akukho bungqina ukuba uMonsanto wenqabile ukwenza uvavanyo okanye ukufundisisa ngenjongo yokufihla ulwazi malunga nomngcipheko wengozi okanye ukuthintela ukufunyanwa kolwazi olutsha malunga nesayensi ye-glyphosate, utshilo.
Igqwetha likaJohnson uMike Miller uthe amagqwetha kaMonsanto azama ukufumana inkundla yezibheno ukuba iphinde izame inyani zelo tyala, ayiyondima yayo.
“IMonsanto ayiwuqondi umsebenzi wesibheno. Asikokuzijonga kwakhona iinyani. Iinyani ezaziphikiswa nje ligqwetha likaMonsanto zaliwa ngokupheleleyo lijaji zaza zaliwa ngumgwebi wetyala… ”utshilo uMiller.
Inkundla yesibheno kufuneka ixhase umonakalo owanikwa ijaji, kubandakanya nomonakalo owohlwayayo, kuba indlela yokuziphatha kukaMonsanto ejikeleze isayensi kunye nokukhuseleka kweyeza layo le-glyphosate "lalibalasele," utshilo uMiller.
Ubungqina obunikwe kwityala likaJohnson lubonise uMonsanto ebandakanyeka ekubhaleni ngesiporho kwamaphepha enzululwazi ngelixa isilele ukuvavanya ngokwaneleyo i-glyphosate herbicides yomngcipheko we-carcinogenicity. Inkampani ke iqale uhlaselo "olungazange lubonwe" malunga nokuthembeka kwezazinzulu zomhlaza wamazwe aphesheya ezazichaza i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu kwi-2015, uxelele iphaneli yezomthetho.
Kumonakalo owehlayo, njengoko uvavanya ukugwenxa kweMonsanto kufuneka ubandakanye kubutyebi beMonsanto. Kwaye iwonga kufuneka lanele ukuhlaba, ”utshilo uMiller. "Phantsi komthetho waseCalifornia ngaphandle kokuba utshintshe indlela yokuziphatha ayihambelani nezohlwayo."
Iphaneli yezibheno ineentsuku ezingama-90 zokukhupha isigwebo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker B-iseli engeyiyo iHodgkin lymphoma, Bayer, California, umhlaza, enkantolo, EPA, glyphosate, impilo, herbicides, IARC, zomthetho, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, ukubulala ukhula
Isibheno kwisilingo sokuqala somhlaza seMonsanto Roundup ukuba siviwe ngoJuni
ezaposwa ngomhla Aprili 9, 2020 by UCarey Gillam
Inkundla yezibheno yaseCalifornia iseti uviwo lwangoJuni Izibheno ezinqamlezileyo ezibangelwa lityala lokuqala malunga nezityholo zokuba i-Monsanto's herbicides ibangela umhlaza.
INkundla yeziBheno yesiThili sokuQala seZibheno saseCalifornia ithe ngoLwesine ukuba yayilungiselela ukuxoxwa kwetyala ngoJuni 2 kwityala likaDewayne "Lee" Johnson v. Monsanto. Ukuchotshelwa kwetyala kuyakwenzeka phantse kwiminyaka emibini emva kokuqala kwetyala likaJohnson kunye neminyaka emibini emva kokuba uBayer AG ethengile iMonsanto.
Ijaji enye unike uJohnson i-289 yezigidi zeedola ngo-Agasti 2018, kubandakanya i-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo, ukufumanisa ukuba ayenzanga kuphela i-Monsanto's glyphosate-based herbicides eyabangela ukuba uJohnson aphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma, kodwa ukuba inkampani ibazi umngcipheko womhlaza kwaye yasilela ukulumkisa uJohnson.
Ukulungiselela iingxoxo zomlomo kwisibheno sikaJohnson, inkundla yesibheno yathi iyasikhaba isicelo esenziwe yiGqwetha Jikelele laseCalifornia lokuba lifake isishwankathelo se-amicus kwicala likaJohnson.
Amaxwebhu angaphakathi akwabonisa ukuba iMonsanto ilindele ukuba i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza ihlukanise i-glyphosate njengento enokwenzeka okanye enokubangela i-carcinogen yabantu ngo-Matshi ka-2015.
Amashumi amawaka abamangali bafaka isimangalo ngokuchasene neMonsanto besenza amabango afanayo nakaJohnson, kwaye ezinye izilingo ezongezelelweyo zenzekile ukusukela kwityala likaJohnson. Zombini ezo zilingo zakhokelela kwizigwebo ezinkulu ngokuchasene neMonsanto.
Ukumisela umhla wesibheno sikaJohnson, inkundla yezibheno yathi "iyayiqonda imeko ethathela ingqalelo la matyala kwaye iye yaqhubeka nokuwunika eyona nto iphambili ngaphandle kweemeko zangoku ezingxamisekileyo" ezenziwe kukusasazeka kwe-coronavirus.
Intshukumo yenkundla yezibheno kwityala likaJohnson iza njengoko kubikwa iBayer ukuzama ukuziphindezela kwiindawo zokuhlala ekuxoxiswene ngazo namafemu aliqela aseMelika abamele uninzi lwabamangali.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBaum Hedlund, Bayer, California, umhlaza, enkantolo, ukutya, glyphosate, impilo, Lee Johnson, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, trial
Igqwetha labamangali abajongene nomhlaza abanjwe kwizityholo zolwaphulo-mthetho
ezaposwa ngomhla Disemba 18, 2019 by UCarey Gillam
Umdlalo weqonga osemthethweni ojikeleze ubunzima besityholo somhlaza we-Roundup umane ufumane i-notch.
Izityholo zolwaphulo mthetho bafakwa kule veki ngokuchasene negqwetha uTimothy Litzenburg bethetha igqwetha elineminyaka engama-37 lifune i-200 yezigidi zeedola "kwimirhumo yokubonisana" endaweni yokuthula malunga nolwazi aloyikisayo ukuba lunokuba yingozi kumthengisi wemichiza eMonsanto.
I-Litzenburg yahlawuliswa ngenani elinye lokuzama ukuphanga, iyelenqe kunye nokusasaza unxibelelwano lwangaphakathi ngenjongo yokuphanga. Ebe ubanjiwe ngolwesibini kodwa ukhululwe kwi bond.
U-Litzenburg wayeligqwetha lika-Dewayne “Lee” Johnson elikhokelela kwityala lika-Johnson lika-2018 nxamnye neMonsanto, elakhokelela $ 289 yezigidi zeerandi ngokuthanda kukaJohnson. Ityala belilelokuqala kwezintathu ezenzekileyo ngokuchasene neMonsanto ngenxa yezityholo zokuba i-glyphosate-based herbicides efana neRoundup ibanga i-non-Hodgkin lymphoma. IMonsanto, kunye nomnini wayo waseJamani uBayer AG, baphulukene nazo zontathu izilingo ukuza kuthi ga ngoku kodwa babhengeza isigwebo.
Nangona i-Litzenburg yayijongene nokulungiselela uJohnson ukulingwa, akazange avunyelwe ukuthatha inxaxheba ngexesha lomcimbi ngenxa yokukhathazeka malunga nokuziphatha kwakhe okwakubanjwe yiMiller Firm, eyayingumqeshi wakhe ngelo xesha.
Ifemi yeMiller emva koko wagxothwa ILitzenburg kwaye wafaka isimangalo etyhola uLitzenburg ekuziphatheni, kunye "nokunganyaniseki nokungaziphathi kakuhle." ILitzenburg iphendule ngo counter-ibango. Amaqela kutsha nje athethathethane ngesivumelwano esiyimfihlo.
Inkathazo entsha yeLitzenburg yeza ngohlobo lwesikhalazo solwaphulo-mthetho esifakwe ngoMvulo kwinkundla yomanyano eVirginia. Isikhalazo asiyichazi inkampani i-Litzenburg ukuba ifuna imali kuyo, ibhekisa kuyo njenge “Inkampani 1.” Ngokwentlawulo, uLitzenburg uqhakamshelane neNkampani 1 ngoSeptemba walo nyaka echaza ukuba ulungiselela ityala eliza kutyhola iNkampani 1 kunye neenkampani ezinxulumene nokubonelela ngemixube yemichiza esetyenziswe yiMonsanto ukwenza igama layo elibizwa ngokuba yiRoundup herbicide kwaye iNkampani 1 ibisazi ukuba izithako zingumhlaza kodwa asilele ukulumkisa uluntu. Wazama ukubandakanya iqumrhu ekubhekiselwe kulo kwisikhalazo njengeNkampani 2, echazwe ngabatshutshisi njengenkampani ethengisa esidlangalaleni yaseMelika ethe yathenga iNkampani 1 kwi2018.
Kwangoko kulo nyaka u-Litzenburg uxelele i-US Right to Know ukuba wayesenza esi sikhalazo ngokuchasene nomthengisi weekhemikhali Huntsman wamanye amazwe kunye nezinto ezinxulumene noko, kodwa akucaci ukuba ngaba uHuntsman uyabandakanyeka na kwesi senzo.
I-Litzenburg, ngoku eliqabane lenkampani ye IKincheloe, iLitzenburg kunye nePendleton, Khange aphendule kwisicelo sokuphawula. Kwaye neqabane lakhe lomthetho uDan Kincheloe. I-Litzenburg ibanga ukuba imele abathengi abangama-1,000 abamangalela iMonsanto malunga nezityholo zomhlaza we-Roundup.
Ngokwesi sikhalazo, u-Litzenburg uxelele igqwetha leNkampani 1 ukuba uyakholelwa ukuba angafaka isimangalo kwasekuqaleni ezinye ezininzi ziya kulandela. Ukuthintela loo nto, iNkampani 1 inokungena "kulungiselelo lokubonisana" neLitzenburg, igqwetha lathi laxelela inkampani. Njengomcebisi u-Litzenburg uya kuba nokungqubana kwemidla eya kumthintela ekufakeni isimangalo esisongelwayo.
Ngokwengcaciso, isikhalazo sathi sanikezelwa ligqwetha leNkampani 1, u-Litzenburg wathi uzakufuna imali ezizigidi ezi-5 zeerandi zamatyala abhaliweyo kunye nelungiselelo lokubonisana ne-200 yezigidi zeedola kuye kunye nomlingane. Isikhalazo solwaphulo-mthetho sithi uLitzenburg uyibhale phantsi igqwetha le-imeyile kwigqwetha lenkampani, elumkisa ngelithi ukuba inkampani ayiyithobeli, iLitzenburg izakudala "Roundup Two," enokuthi ibangele "ingxaki eqhubekayo kwaye ekhulayo" yeNkampani 1.
U-Litzenburg wabhala nge-imeyile ukuba i-200 yezigidi zeerandi zesivumelwano sakhe kunye nomlingane "lixabiso elifanelekileyo," ngokwesikhalazo solwaphulo-mthetho. Ubuncinci ababini "abahlobo" ababandakanyekayo kwesi sikimu, ngokwesikhalazo.
Igqwetha leNkampani 1 liqhakamshelane neSebe lezoBulungisa e-US ngo-Okthobha kwaye emva koko abaphandi barekhodile umnxeba kunye neLitzenburg bexoxa nge-200 yezigidi zeedola awayezifuna, isikhalazo sithi
Ngokwesi sikhalazo, i-Litzenburg yarekhodwa isithi: “Indlela endicinga ukuba niyakucinga ngayo kwaye besicinga ngayo kukonga icala lenu. Andiqondi ukuba le nto iyafayilwa ize ijike ibe yintsokolo enkulu, nokuba niyaphumelela amatyala kwaye niyeke ixabiso ... andicingi ukuba ikhona indlela eninokuphuma ngayo ngaphantsi kweebhiliyoni zeerandi. Kwaye, niyazi, kum, eh, eli lixabiso lokuthengisa umlilo ekufuneka nilithathele ingqalelo… ”
Ngethuba lolunye unxibelelwano neNkampani 1, uLitzenburg utyhola ukuba xa efumene i-200 yezigidi zeedola, wayezimisele "ukuthatha indawo" ngexesha lokufakwa kwezidalwa ezinetyhefu kwiNkampani 1 ukujongela phantsi amathemba abamangali bexesha elizayo ukuzama ukumangalela inkampani.
Ukuba iNkampani 1 ingene kwisivumelwano naye, uLitzenburg kuthiwa uthe, oko kuya kuthetha ukuba iNkampani 1 "iyakuthintela umngcelele wezothuso eziye zamangalelwa yiBayer / Monsanto."
Ukutshutshisa ityala kwiSebe lezoBulungisa laseMelika nguMncedisi oyiNtloko uL. Rush Atkinson kunye neNtloko enguMncedisi oyiNtloko uHenry P. Van Dyck weCandelo loLwaphulo-mthetho.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, imichiza, enkantolo, glyphosate, herbicides, igqwetha, ILitzenburg, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, trial
UPDATED- Uvavanyo lwaseSt. Louis malunga neMonsanto Roundup Cancer Claims in Limbo
ezaposwa ngomhla Septemba 19, 2019 by UCarey Gillam
(UPHANDO) -Ngo-Septemba 12, iNkundla ePhakamileyo yaseMissouri yalivala eli tyala, yavumelana nabameli bommangali ukuba isicelo sikaMonsanto sokuba inkundla ephakamileyo ithathe umcimbi weso sigqibo sasiyimpikiswano. Louis. Ijaji yeNkundla yeSekethe uMichael Mullen emva koko wagqithisela bonke abamangali ngaphandle kukaWinston baya eSt NgoSeptemba 13 ukuyalela.)
Uvavanyo lwango-Okthobha lokufaka iqela lezigulana ezinomhlaza ngokuchasene neMonsanto kwinkampani eyayisakuba likhaya laseMissouri lurhintyelwe kwiwebhu yezenzo ezixakekileyo ezisongela ukulihlehlisa ngokungapheliyo ityala.
Ukugcwaliswa kweenkundla ezintsha kubonisa ukuba amagqwetha omabini amacala kaWalter Winston, et al v. UMonsanto bebebandakanyeka kuthotho lweendlela ezinokuthi zibabuyisele kubo ezikhokelela kumhla wokuvavanywa komhla we-15. isethwe ngu Louis iJaji yeNkundla yeSekethe uMichael Mullen. Amagqwetha abamangali abali-14 abakhankanywe kwityala likaWinston bebenyanzelisa ukugcina ityala labo ukuze bakwazi ukubonisa amabango amaxhoba omhlaza kwiJaji yaseSt. Louis kwinyanga ezayo. Kodwa amagqwetha eMonsanto abekhona ukusebenza ukulibazisa ukulingwa kunye nokuphazamisa ukudityaniswa kwabamangali.
Isimangalo sikaWinston, esenziwe ngoMatshi we-2018, yayiza kuba lityala lokuqala ukwenzeka kwindawo yaseSt. Ngaphambi kokuthengisa kwinkampani yaseJamani iBayer AG kunyaka ophelileyo, iMonsanto yayizinze kwidolophu yaseCreve Coeur kwaye yayingomnye wabaqeshi abakhulu baseSt. Izilingo zomhlaza we-Roundup ezazisetelwe indawo yaseSt.
Abamangali kwityala lika Winston baphakathi kwabantu abangaphaya kwe-18,000 e-United States betyhola uMonsanto besithi ukubhencwa kwi-glyphosate-based herbicides kubangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma kwaye iMonsanto ifihle iingozi ezinxulunyaniswa nababulali bayo bokhula.
Ukubuyela umva nangaphaya malunga nokuba ityala likaWinston linokwenzeka phi okanye lingenzeki nini laqala ngaphezulu konyaka ophelileyo kwaye alibandakanyekanga inkundla yaseSt. Louis kuphela kodwa nenkundla yezibheno eMissouri nakwiNkundla ePhakamileyo yelizwe.
Ngo-Matshi walo nyaka iMonsanto Ifayile isindululo ukuqhawula nokususa abommangali abali-13 kwali-14 kwityala likaWinston lisuka kwiNkundla yesiXeko iSt. Louis lisiya kwiNkundla yeSekethe yeLizwana laseSt. Louis, apho yayikhona iarhente ebhalisiweyo yenkampani nalapho “indawo ifanelekile.” Isindululo saliwe. Inkampani ifake isimangalo esifanayo ngo-2018 kodwa sakhatywa.
Amagqwetha abamangali bakuchasa ukwahlulwa nokutshintshelwa ebutsheni balo nyaka, kodwa ngoku bayitshintshile loo meko kuba phakathi kwayo yonke le ntshukumo, uMonsanto ebefuna ungenelelo yiNkundla ePhakamileyo yaseMissouri. Inkundla ephakamileyo yombuso Ulawule ekuqaleni kwalo nyaka kwityala elingadibananga nokuba bekungafanelekanga ukuba abamangali ababekwe ngaphandle kweSt. Louis City bajoyine amatyala abo kubahlali besixeko ukuze bafumane indawo eSt. Inkundla yaseSt kudala kuthathelwa ingqalelo indawo efanelekileyo yabamangali kwizenzo zobunzima
Isicelo sikaMonsanto sokungenelela yiNkundla ePhakamileyo yaseMissouri savuzwa nge-3 kaSeptemba xa iNkundla ePhakamileyo yakhupha Uxwebhu lokuqala lwesithintelo”Evumela ityala likaWalter Winston“ ukuba liqhubeke njengoko bekucwangcisiwe ”kwiNkundla Yesekethe yaseSt. Kodwa inkundla yathi amatyala abanye abamangali abali-13 abajoyine isimangalo sikaWinston awanakho ukuqhubekeka ngeli xesha njengoko ithathela ingqalelo indlela yokusingatha amatyala. Inkundla yayalela ukunqunyanyiswa kwayo nayiphi na into eyenziwayo yiNkundla yesiXeko iSt. Louis, de kwawiswa omnye umthetho wale Nkundla.
Esoyika ukuba ityala labo liza kwaphulwa kunye / okanye ukulibaziseka belinde isigqibo seNkundla ePhakamileyo ngendawo, amagqwetha abamangali ngo-Septemba 4 athi Ukurhoxisa inkcaso yabo kwisicelo sikaMonsanto sokudluliselwa kwetyala kwiSt.
Kodwa ngoku uMonsanto akasafuni ukuba ityala lihanjiswe linikezwe inyathelo leNkundla ePhakamileyo. Kwifayile Kwiveki ephelileyo le nkampani ithe: “Abamangali balwa indawo ngalo naliphi na ithuba, endaweni yokuvuma ukuhambisa amabango abo eSt. Louis County kwaye bafune ukuxoxwa kwetyala kwakudala. Ukuwongwa kwabamangali bakaWinston kolu khetho kuzakukhuthaza umdlalo wokudlala wodwa. ”
NgoMvulo, amagqwetha abamangali wafaka impendulo bethetha ukuba abamangali baseWinston kufuneka badluliselwe eSt. Louis County njengoko uMonsanto wayecelile ngaphambili kwaye oko kuyakwenza umba wendawo phambi kwenkundla. Bona phikisanad ukuba ijaji eSt. Louis City ebichophele ityala likaWinston kufuneka iqhubeke nokusingatha eli tyala ngaphakathi kwinkundla yenkundla.
“Ngokurhoxa kwenkcaso yabo kwisindululo sikaMonsanto, abamangali bavumile ukukhululeka kwezicelo zeMonsanto zale Nkundla - ukutshintshelwa kwabamangali baseWinston eSt. Louis County,” bafaka amaphepha abo babamangali. Ityala labamangaleli bakaWinston lilungele ukuxoxwa kwetyala. Ukuba ityala ligqithiselwe eSt. Louis County ngokufutshane, abaMangali bangaqala ukuxoxwa kwetyala okanye ngokusondela kwishedyuli ekhoyo ngoku. ”
Nokuba ityala lisaqhubeka phakathi ku-Okthobha e-St. Louis usengumbuzo ovulekileyo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, Bayer, umhlaza, enkantolo, EPA, zolimo, glyphosate, Missouri, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, St. Louis, trial